सेयर बजारबाट प्रशस्त कमाउँदै आधा विश्व घुम्ने नारीको कथा ! - Laltin Media
Home»मोटिभेसन»सेयर बजारबाट प्रशस्त कमाउँदै आधा विश्व घुम्ने नारीको कथा !
By लाल्टिन डट कम July 3, 2022 No Comments2 Mins Read
बैंकको आकर्षक जागिर छोड्ने मान्छे विरलै हुन्छन्। तर, संसारमा भिन्न खालका सपना देख्ने मानिसहरु पनि हुन्छन् जसलाई बैंकिंग पेशाको पेलाई त्यति मन पर्दैन।
त्यस्तै कथा छ भारतकी राजर्षिता सुरको ! राजर्षिताको सपना संसार घुम्ने थियो। त्यसैले उनले बैंकको जागिरको वास्ता गरिनन्। उनको सपना पूरा गर्ने माध्यम बन्यो सेयर बजार।
राजर्षिताले मुम्बईको एक निजी बैंकको ट्रेजरी डिपार्टमेन्टमा जागिर पाइन्। उनलाई जागिरमा खासै समस्या थिएन। तर, जतिबेला चाह्यो त्यतिबेला घुम्न जान उनले बिदा नपाउने स्थिति थियो।
राजर्षिताको जिम्मेवारी बैंकमा विदेशी मुद्रा व्यापार हेर्ने थियो। कार्यालय समयमै बाँधिनुपर्ने बाध्यता नपर्ने र खर्चको टेन्सन नहुने गरी पैसा कमाउने कुनै काम होस् भन्ने उनको चाहना थियो। त्यसपछि उनले सेयर बजारमा आफ्नो भाग्य परीक्षण गर्ने निर्णय गरिन्।
बैंकको जागिर छाडेर राजर्षिताले स्वतन्त्र रुपमा सेयर बजारमा कारोबार गर्न थालिन्। सुरुमा उनले ३ वर्षसम्म एउटा कर्पोरेट फर्ममा इक्विटी ट्रेडरका रुपमा काम गरिन्। यो जागिरसँगै उनले सेयर बजारमा ट्रेडरका रुपमा सक्रिय पनि रहिन्।
विस्तारै राजर्षिताले सेयर बजारको चाल बुझ्न थालिन् र मनग्य आम्दानी पनि गर्न थालिन्।
हाल कर्पोरेट फर्मको जागिर छोडेर पूर्ण रुपमा सेयर बजारमा सक्रिय छिन्। योसँगसँगै उनले विश्व भ्रमण गर्ने सपनालाई पूरा गर्न विदेश यात्रालाई जारी राखेकी छन्।
आज राजर्षितालाई लगानी गुरुका रुपमा मान्यता दिइएको छ। सेयर बजारमा कारोबार गरेको ८ वर्ष भइसकेको छ। राजर्षिताले अहिलेसम्म बेलायत, टर्की, दक्षिण पूर्वएसिया र युरोपको करिब ७० प्रतिशत भ्रमण गरिसकेका छन्। भर्खरै नेपालको भ्रमण पूरा गरी केन्या र आइसल्यान्ड जाने तयारीमा छन्।
राजर्षिताले विदेश भ्रमणका लागि बर्सेनि कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ छुट्याउँछिन्। हरेक महिना ३–४ प्रतिशत नाफा कमाउने लक्ष्य रहेको उनी बताउँछिन्। यो लक्ष्य हासिल हुनेबित्तिकै उनी विदेश भ्रमणमा निस्किन्छिन्।
सेयर कारोबारका बारेमा राजर्षिता निकै संयम र सतर्कताका साथ लाग्नुपर्ने बताउँछिन्। धेरैभन्दा धेरै पैसा कमाउने लोभमा मानिसले आफ्नो कमाइ सबै गुमाउँछन्। उनी आफैँले पनि धेरै कमाउनका लागि एफ एन्ड ओ ट्रेड (फ्युचर एन्ड अप्सन्स) मा पैसा गुमाएकी थिइन्। तर, अब उनले यो गल्तीबाट पाठ सिकेर अल्पकालीनभन्दा दीर्घकालीन लगानीमा बढी ध्यान केन्द्रित गरेकी छन्।